အသက်ကယ်လေအိတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၃ အသက်ကယ်ခါးပတ်၏ အရေးပါမှု
လေအိပ်များထည့်သွင်းတပ်ဆင်သည့် နည်းပညာမပေါ်မီ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် လုံခြုံရေးခါးပတ်များကို မော်တော်ကားများတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ပြင်းထန်သောယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားချိန်တွင် ယာဉ်မောင်းသူအနေဖြင့် ခါးပတ်ပတ်ထားသည့်တိုင် အင်နားရှားသဘောတရားအရ ရှေ့လေကာမှန်ကြီးနှင့်ဆောင့်မိခြင်း၊ စတီယာရင်ခွေဖြင့်ဆောင့်မျခြင်းတို့ဖြစ်ကာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခြင်း အသက်သေဆုံးရခြင်းများ ဖြစ်ပွားရလေ့ရှိသည်။
ထိုအဖြစ်မျိုးကို ရှောင်လွဲနိုင်ရန် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားချိန်တွင် အသက်ကယ်လေအိပ်ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ပေးသည့် နည်းပညာတစ်ရပ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အသက်ကယ်လေအိပ်များကို မော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ရာ၌ မော်တော်ကား၏အတန်းအစားနှင့် ဈေးနှုန်းအပေါ်မူတည်းပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသည်။
အတန်းစားနိမ့်၍ ဈေးနှုန်းချိုသောမော်တော်ကားများ၌ အသက်ကယ်လေအိပ်များကို သာမန်အားဖြင့် တစ်ခုသာ တပ်ဆင်ပေးထားပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော မော်တော်ကား များ၌မူ လေအိပ် နှစ်ခုမှ လေးခုအထိ တပ်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။ အတန်းအစားမြင့်ပြီး ဈေးအလွန်ကြီးသော ဇိမ်ခံမော်တော်ကားများတွင်မူ အသက်ကယ်လေအိပ် ရှစ်ခုအထိ ထည့်သွင်း ထုတ်လုပ်ထားကြသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါမော်တော်ကားအားလုံး၌ တူညီသောအချက်မှာ အသက်အန္တရာယ် ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် အသက်ကယ်လေအိပ်ကို စတီယာရင်ခွေ၏အလယ်တွင် တပ်ဆင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်ကယ်လေအိပ်ကို ပါးလွှာသော နိုင်လွန်ဖြင့် ပြုလုပ်ကာ လေအိပ်ကာဗာ၏အောက်၌ အထပ်ထပ်ခေါက်၍ ထည့်သွင်းထားသည်။ ကာလတာရှည် ခေါက်ထားခြင်းကြောင့် လေအိပ်အသားခြင်း ပူးကပ်မသွားစေရန်နှင့် ပွန်းပိခြင်းများ မဖြစ်စေရန် အလွန်နူးညံ့သော လေအိပ်ပေါင်ဒါမှုန်မျာကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသည်။
အသက်ကယ်လေအိပ်၏အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံသဘောတရားမှာ မောင်းနှင်နေရင်း မာကျောသည့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုခုကို မော်တော်ကားဝင်တိုက်မိသဖြင့် ချက်ချင်းအရှိန်လျော့ကျခဲ့ပါက ယင်းကဲ့သို့ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ရုတ်တရက် အရှိန်ကျဆင်းခြင်းကို ခံစားသိရှိနိုင်သော အာရုံခံကိရိယာက လေအိပ်ကို လေအိပ်ကို လေဖြည့်သွင်းပေးမည့် ကိရိယာကို အလုပ်လုပ်စေခြင်းဖြင့် လေအိပ်ပွင့်ထွက်ဖောင်းကားလာခြင်း ဖြစ်သည်။
လေဖြည့်သွင်းမည့် ကိရိယာ ထဲတွင် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော ဆိုဒီယမ်အဇိုက် (Sodium Azide)နှင့် ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ် (Potassium Nitrate)တို့သည် ထိခိုက်မှုအာရုံခံကိရိယာက သတင်းပေးပို့ချိန်တွင် ချက်ချင်းဓာတ်ပြုပြီး နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့များကို ထွက်လာစေသည်။ ထိုနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့များသည် လေအိပ်အတွင်းသို့ ပြင်းထန်သောအရှန်ဖြင့် တိုးဝင်ရောက်ကာ အသင်ကယ်လေအိပ်ကို တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၃၂၀ နှုန်းဖြင့် ဖောင်းကားလာပြီး ထိခိုက်မှုအန္တရာယ် မဖြစ်စေရန် ခုခံကာကွယ်ပေးလိုက်သည်။
အသက်ကယ်လေအိပ်သည် ပူဖောင်းကဲ့သို့လေလုံမဟုတ်ဘဲ ပတ်ပတ်လည်တွင် အပေါက်များ ပါရှိသည့်အတွက် အရှိန်ပြင်းပြင်းတိုးဝင်လာသော နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့များသည် အဆိုပါအပေါက်ငယ်များမှတစ်ဆင့် အပြင်ကိုထွက်ကုန်ကြသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးသည် တစ်စက္ကန်၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံခန့်သာ ကြာမြင့်သည့်အတွက် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးသည်နှင့် လေအိပ်ဖောင်းထွက်လာသည်ကို သတိမပြုလိုက်မိတော့ဘဲ ပြားချပ်နေသည့် လေအိပ်ကိုသာ မြင်တွေ့ရတော့သည်။ လေအိပ်ပွင့်ထွက်ဖောင်းကားမှုကို မျက်စိတစ်မှိတ် လျှပ်တစ်ပြက်မျှပင်မကြာအောင် ဖန်တီးထားခြင်းမှာ ရှေ့မြင်ကွင်းကို ပိတ်ဆို့ကာရံထားမှု မရှိစေရန် ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် သတိပြုရန်မှာ အသက်ကယ်လေအိပ်စတင်ဖောင်းပွနှုန်းသည် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းအောင် အလွန်လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှသာ တဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအခြေအနေတွင် လုံခြုံရေးခါးပတ်ကို ပတ်မထားခဲ့ပါက ရှေ့သို့ငိုက်သွားပြီး စတင်ပွင့်ထွက်လာသည့်လေအိပ်နှင့် ထိတွေ့ကာ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်သော အသက်ကယ်လေအိပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝရယူခံစားနိုင်ရန်အတွက် ထိုင်ခုံများတွင် တပ်ဆင်ထားသော လုံခြုံရေးခါးပတ်များကို မလွဲမသွေ ပတ်ထားကြရမည် ဖြစ်သည်။
သိပ္ပံစာရေးဆရာ ကိုကိုအောင်။ မော်တော်ကားနှင့် အသက်ကယ်လေအိပ် ဆောင်းပါး။ Automobile weakly car journal ။ vol. 3, No. 29, November 14, 2014
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသက်ကယ်လေအိတ်&oldid=702739" မှ ရယူရန်